Ozi si XFCE !! Kedu ihe ọhụrụ na Xfce 4.12? | Site na Linux
Ozi si XFCE !! Kedu ihe ọhụrụ na Xfce 4.12?
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Emelitere na 13/09/2016 18:20 | Aplicaciones
Anyị enyochaworị ụfọdụ akụkọ banyere XFCE 4.12 site n'ederede ụfọdụ, ma anyị na-agbasa ozi ọma site na isiokwu 3 ndị bipụtara Skunnyk na blog ya ya na ozi ohuru di na ebe nchekwa Git.
Kedu ihe ọhụrụ na Xfce 4.12?
Izu ole na ole gara aga e kpebiri ịdepụta ndepụta nke "chinchi dị egwu" iji kpochapụ iji hapụ Xfce 4.12. Can nwere ike ịchọta ndepụta ebe a. Xfce 4.12, na-akwa ụta maka ọtụtụ, ga-anọgide na-eji gtk2, yana ụfọdụ gtk3 nkwado maka ijikọ mma. Ma eleghị anya, maka nsụgharị ọzọ, a na-agba ha ume ibuga ya na gtk3, ọ bụ ezie na ọ dịlarị Ikey doherty (ee ee, otu ihe ahụ sitere na EvolveOS) na-achọ tinye aka gi na nke ahụ.
Mbugharị mode (ihe dị oke mma mgbe anyị chọrọ nyocha). Lelee vidiyo
Ọhụrụ na customizable tabwin (alt + taabụ) na windo previu. (na onye na-eme ihe ike na-arụ ọrụ naanị).
Nkwado CSD (site na naanị Composer nyeere aka).
Egosiputala ntọala ngosipụta nke ukwuu, yana nkwado maka ịgbatị ọnọdụ desktọọpụ maka ndị nlekota 2.
A ga-etinye ntọala ahụ ọzọ mgbe ejikọrọ mpụta mpụga.
A na-agbakwunye nkwado Touchpad ntọhapụ.
A na-agbakwunye palettes agba na isiokwu dị na ngosipụta na preview dialog maka isiokwu akara ngosi.
Desktop na akwụkwọ ahụ aja na-akwado.
Njikwa ka mma nke otutu ihe nlere.
A gbakwunye -next nhọrọ iji mee ka mgbanwe nke na akwụkwọ ahụ aja.
A gbakwunyere nhọrọ "Move to Trash"
Nkwado maka plugins edere na gtk3.
Omume ka mma nke bọtịnụ / menu.
Ugbu a, enwere ike zoo panel ahụ, nke ejiri dị ka ọdụ ụgbọ mmiri. Lelee vidiyo.
Ihe ọhụrụ xfce4-njikwa-njikwa dakọtara na Xfce 4.10).
Nkwado ka mma maka systemd y na -akwalite
Ejikọtala nkwụnye ọkụ ahụ na nkwụnye ihe ngosi batrị, yabụ amụọla "ngwa mgbakwunye Power Manager" ọhụrụ.
Somefọdụ mgbanwe na usoro nke imewe screenshots
Nchọpụta nke nbanye ka mma kwụsịtụ / inyocha hibernate
Nkwado maka upower 0.99
Lelee tọmbneelụ na ntụpọ.
Tinye iwu ahụ pkexec. Thiszọ a ma ọ bụrụ na onye ọrụ chọrọ iji Thunar iji gbanwee faịlụ dị ka mgbọrọgwụ ma nwee nzere kwesịrị ekwesị, ọ nwere ike ịme ya.
Nkwado maka ibe edokọbara na Gtk3.
Nkwado maka ibugo onyonyo na Imgur.
xfce4-onye njikwa ọrụ:
A na-ehichapụ interface ahụ, ya na ọnọdụ nlele osisi ọhụrụ na mmezi eserese ndị ọzọ.
na nke ahụ niile maka ugbu a .. olee maka ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ozi si XFCE !! Kedu ihe ọhụrụ na Xfce 4.12?
Ọ dị mma, mgbe ahụ nke ahụ ga-abụ mgbe m jiri XFCE ọzọ
Ọ dị mma maka XFCE. Ka anyị hụ ma ọ ga-ekpochasị ebe ọ bụ na ndị niile yiri otu-ka chọkwara ya.
Enwere m oche a n'anya!
Dị Mfe ma Mara Mma!
Ezigbo mma, ha anwaala. Offọdụ n'ime atụmatụ ya masịrị m ma gbaa m ume ka m jiri Xfce karịa. M na-eji ya obere (M na-eji KDE) n'ihi na ọ na-ahapụkarị m ka ọ na-efu obere ihe. Ọ dị njọ na ọ ga-ewe oge iji kwụsie ike Slackware… 🙂
Zaghachi ka ecoslacker
Igbu ndị nwụrụ anwụ ogologo ndụ XFCE!
Anyị ga-anwale ya ma m ga-akwado ha, enwere m olile anya na ha meziwanye ihe m tụrụ anya ya, n'ihi na m hụrụ desktọpụ a n'anya, mana enwere ụfọdụ ihe na-ekwenyeghị m ma ọlị n'ihi etu ha si arụ ọrụ na ọ bụ ya mere m ji jiri Mate. Olileanya na ha doziri nsogbu ndị ahụ ka m wee jiri ya ọzọ.
Ahụrụ m Xfce n'anya, ọ bụ karịa desktọọpụ ugbu a arụnyere na sistemụ FreeBSD bụ Xfce (enwere ike ịhazi ya niile), nwee olile anya itinye akara ngosi "ọdịyo, netwọkụ" n'ụzọ ọfụma, ọzọ na-achọ itinye aka ya na xfce?.
Zaghachi na FreeBSD
Iche na m ga-ahapụ SO ahụ n'ihi na ụda anaghị arụ ọrụ maka m n'ụzọ ọ bụla :, c
Nkem Agu dijo
Kedụ ka ị ga - esi wụnye / melite na Xubuntu 14.04?
Ma ọ bụ na Ubuntu Studio 14.04?
Kedu nke ga-abụ otu ihe belụsọ obere kernel dị ala.
A na-ahụ mgbanwe ndị dị mma. Enwere m mmasị na dashbod zoro ezo na njikwa ọrụ ọhụrụ. Ọ ga-amasị m ka enwere ike ịhọrọ ọrụ ebe m ga-eziga njide ahụ, ọ bụ ezie na ha gbakwunyere otu, ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na nke ahụ "nwere ike ịhazi" nke ịchọrọ.
Shortfọdụ adịghị emezi emegharị adịghị ahụ anya, etinyere palettes agba na isiokwu mana m ghọtara na enweghị ike ịhọrọ agba ọhụụ, nke Mate na LXDE nwere ike ime na GTK2. Karịsịa, ahụrụ m na onye njikwa ọrụ ọhụrụ ahụ anaghị enye ọnụ ahịa RAM nọrọ, naanị pasent na-edoghị anya (ego ole RAM gụrụ Xfce, ezigbo ahụ, nke gbara gburugburu?), Lxtask na-eme.
Mana hey, dịkwa mma, Xfce bụ desktọọpụ m ugbu a.
N'okwu m, M na-arịọ maka enyemaka iji nweta desktọpụ m na XFCE kwụba.
Iji gbanwee agba na xfce, ị nwara ịwụnye ngwugwu a?:
M na-agbanwe agba nke ụfọdụ ihe na-enweghị nsogbu.
Ejighị m xfce kemgbe ọtụtụ afọ, ebe m nwere netbook, mana achọpụtara m na mwekota na imgur dị mma, ebe m kpọrọ asị na ihe osise nke ZimageZ.
Zaghachi nye cristianhcd
Adolf Rojas dijo
Na-ekpughe, site n'aka Chineke kpughere ... ha echefuru banyere ikpughe, nkuku dị ọkụ na windo ...
Zaghachi adolfo rojas
Ihe ederede di nma ... mana ihe kachasi mkpa bu efu:
XFCE 4.12 GA-AAW WE AKW WEKWỌ ND L MGBE FEBRUARY !!
Ọ bụ na otu nke Skunnyk si isiokwu: http://blog.alteroot.org/articles/2015-02-19/new-from-xfce-part-3.html
Ejirila m Xfce 4.11 (ule maka 4.12 anụ ahụ) site na AUR na Manjaro obere karịa ọnwa 6, nke bụ eziokwu bụ na anaghị m agbanwe Xfce maka onye ọzọ, naanị ihe ọjọọ bụ ịchọ GTK2 na GTK3 isiokwu ndị na-anaghị emebi mma. site na desktọọpụ (tumadi maka ngwa GTK3)
Ezigbo ozi dị mma, olee mgbe a ga-ewepụta ụdị ọhụrụ Xfce?
Ọ bụ ezigbo gburugburu ebe obibi, dịka ha na-ekwu "nkume siri ike." M na-eji ya ruo oge ụfọdụ ma ọ dabere na m, ezigbo oge nzaghachi.
Zaghachi na Santiago Murchio
onye na-ebu mmiri dijo
Ọ dị ugbu a na ụdị mmepe nke Manjaro ma enwere ike ibudata ya ebe a:
Zaghachi onye na-ebu mmiri
Ugbu a, m nọnyeere KDE, ọ na-esiri m ike ịgbanwe ọnọdụ m. Ma eziokwu na obi dị m ụtọ ịhụ na ha nọgidere na-akwado ya
Maka ndị anyị nwere PC prehistoric, desktọpụ a dabara na okomoko, dị ka ọtụtụ na-ekwu, dị mfe, rụọ ọrụ nke ọma, mara mma ma mezuo ebumnuche ya, nke mere na karịa, mgbe ụdị ọhụrụ ahụ si na oven pụta, gị onwe gị bụ onye zitere onwe gị ozi ọma otu «vox populi» (:
Na ekele maka ama (:
xfce ọ bụrụ na ha etinye ya na xubuntu 15.04 M ga-anwale ya, ma ọ bụrụ na ọ bụghị na m ga-eche ka ule Debian ọzọ bụrụ nke kwụsiri ike, ya bụ, site na anya, ana m agbakọ na August ma ọ bụ ya mere m ga-eji Debian nwalee ya ma ọ bụrụ na ha etinyeghị ya na Xubuntu ugbu a n'April .
Emeghariri Version 4.12 dika ulo.
M ji ya kemgbe ọtụtụ afọ. Ọ bụ oche ndina m. Ebube !!! Enweghị m ike ichere iji nweta aka m na ya.
Ozi oma n’enweghi obi abua.
Nchịkọta nke nhọrọ "gaa na ahịhịa" sitere na desktọọpụ na-efu efu, onye njikwa ọrụ ka dịtụ mma (ọ bụ ezie na otu onye ọrụ na-atụnye ụtụ na ntinye ya, ọ ka anaghị enye RAM nri) ... yana ụfọdụ obere ihe na ndozi karịa ka ha na-eme ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ ... Enweghị m ndidi ka m hụ otu esi arụ ọrụ ha.
N'aka nke ọzọ, enwere ike ime ụzọ iji obere panel dị ka Dock na-echeghị XFCE 4.12, na XFCE mbụ m (Xubuntu 13.10) ejirila m usoro a ¿?… Ka o sina dị, ana m edebe Cairo-Dock na Ọ dị ezigbo mma ma nwee ike ịhazigharị ya, ewepụrụ m ịba uru ya ma ọ na - agakọ nke ọma na conky enwere m ike ịnwe desktọpụ m na kọlụm m dị ka o kwere mee… .n'ọnọdụ ọ bụla enwere m ike ịmeghe ngalaba ahụ ka ọ dị ka ọdụ ụgbọ mmiri, eziokwu bụ na ọ bụ ezigbo maka ìgwè nwere obere ego.
Hugmị na ekele maka ịnọ ebe ahụ Site na Linux ...;)
M malitere na desktọpụ a n'oge na-adịghị anya na OpenSUSE, ọ dị ka ọ dị ezigbo mma ma dịkwa mma
Ndị Rengo dijo
Ọmarịcha! Mana ekwuputala ya maka ihe karịrị afọ 2 ... Enwere ụbọchị e mere atụmatụ?
Zaghachi El Rengo
enwere uzo ozo nke ngwa menu dika kde ... ugbua ahuru m abuo
Aptoide: Magburu onwe ọzọ ka Google Play Store maka anyị gam akporo
Mmekọrịta: a free ọzọ ka Dropbox na Bittorrent mmekọrịta